Zara — Tsara Soratra
Amin’ny iray sy sasany mahery dimy izao eto Miandrivazo. Ela ny mandigny hoy ny any avarabaratra any Tsimihety any. Manomboka mitakerikerika aho eto am-piandrasana olona tsy fantatra. Mijoro eto amin’ny sisin’ny tobin-dasantsy eto aho efa ho roapolo minitra izay, tonga dimy ambinifolo minitra mialoha noho ny fahadodonako hahita anao fa tamin’ny iray sy sasany ny fotoanantsika. Tsy mandeha ny findainao ka tsy afaka miantso aho. Olona tsy fantatra ianao fa ny olona be anjoria sy be andrakandrana toa ahy itony mora liana amin-javatra hafahafa ka dia izao isika mifanao fotoana eto izao. Ierehan’ny masoko avokoa izay tovovavy mipoitra amin’iretsy sampanana lehibe telo etsy alohako. Toa amboarin’ny masoko hiova ho mena avokoa ny lokon’akanjon’izay mandalo fa izay, hoy ianao, no lokon’akanjo hamantarako anao. Nidobodoboka ery ny fo keliko isaky ny misy salovan’olona manopy mena manaitra ny masoko. Saingy tsy nisy nivily tety amiko ireny dia nangaina teo indray aloha aho. Fa nony elaela, inty nisy tovovavy iray nanao akanjo mena misy sary fo tamy, tazako nitsikitsiky avy ery lavidavitra ery. Maso nitopy tokana monja teny aminy dia ampy naharesy lahatra ahy avy hatrany fa tsara tarehy izy:
- Dia mbola tsy izy indray koa ve ity ry Tompo Zanahary!? Hoy aho nibitsibitsika tao am-poko toa natahotra ho diso fanantenana.
Kanjo, tsy nivily izy fa nolalovany fotsiny aho. Fa ahoana ihany ary? Soa ihany aza aho tsy mbola nanao fihetsika hafahafa fa dia afa-baraka teto angamba. Manahirana ity tantara ity. Nefa moa efa natomboka ka dia handrasako eto izay hiafarany.
Fa mbola teo am-pamisavisana ilay tranga teo aho no inty nisy iray hafa indray, tena mba mahafatifaty kely koa ity izy saingy toa tsy ho ilay andrasako mihitsy satria ny akanjony aza miloko fotsy ranoray. Lasa ihany ny eritreritro:
- Mety ho izy ihany fa nisolo akanjo angamba noho ity mari-pana diso miabo eto am-bavahadin’I Menabe ity?
Fa tsy tonga teto akaikiko akory izy dia niverin-dalana ary nivily teo amin’ilay toeram-pisakafoana teo akaiky teo dia nionona indray ny saiko. Taorina kelin’iny dia inty indray nisy iray hafa toa tena manitsy aty amiko raha ny fijery azy, saingy tsy mitsiky mihitsy na kely aza, akanjo mena matromatroka izay no eny aminy.
- Ity vao tena izy! Hoy ny teny ireriko.
Loza, raiki-tahotra aho! Tsy tovovavy ity manatona ahy fa ramatoa, Marina tsy I neny no mitovy taona aminy… Inona no hataoko? Saika hikisaka tsimoramora aho kanjo efa tonga teo akaikiko izy:
- Azafady, hainao I Feno? Hoy izy nanontany ahy.
- Ie, ianao angaha ilay Zara? Hoy aho,
- Ie, hoy ilay ramatoa, nanafatra anao angaha izy?
- Mikasika ilay fotoana nifampiresahanareo an-telefaonina ve? Hoy aho naka toky.
- Ie, hoy izy namaly tsy taitra. Dia ahoana hono?
Sahirana aho, inona no hambarako? Tena I Zara ity. Tsy araka ny nanampoizako azy.
- Rehefa kelikely hono miverina fa ho avy eo izy, hoy aho nandainga tsy fidiny noho ny tsy filaminan-tsaiko.
Fa tsy tapitra ny teniko dia nisy niantso avy tery am-pita:
- Madama, hay efa eo ianao? Hoy ilay tovolahy manao fanamian’ny tobin-dasantsy.
- Ie, hoy izy. Fa taiza indray moa I Feno ity? Izaho ange ka maika e…
- Naka ilay zavatra mihitsy aho ka, efa ity ilay izy fa aza matahotra I madama, hoy ilay tovolahy namaly.
Izay vao nisento tokana aho. Avotra ihany! Hay anarana mitovy fa i Feno tahaka ny anarako koa ny anaran’ilay mpiasan’ny tobin-dasantsy ary Zara tahaka ilay olona andrasako koa ny anaran’ilay ramatoa. Nanome zavatra azy I Feno dia lasa izy nandeha. Izaho kosa namoaka ny findaiko avy ao am-paosy mba hijery lera, hay efa amin’ny roa latsaka folo izao. Tsy ho avy ve I Zara? Tara roapolo minitra be izao, handrasako hatramin’ny roa ora ho fialana nenina fa raha tsy tonga amin’izay dia handeha aho. Kanjo, tamin’ny roa latsaka dimy, iny nisy hafatra tonga. Nosokafako ilay hafatra:
- Azafady fa izao vao velona ny findaiko, tsy afaka mivoaka aho fa tongava ato amin’ny “airtel”, miasa ato aho, hoy ny hafatr’I Zara.
Tsy ampy dimy minitra aho dia tonga, olona roa no tazako: ny voalohany tovovavy tsara tarehy kely mipetraka ao aorian’ilay toerana fandraisana olona; ny faharoa I madama Zara, ilay ramatoa tetsy amin’ny tobin-dasantsy, mipetraka eo amin’ilay seza akaikin’ny varavarana. Inona indray koa re ity e? Sadaikatra be ihany aho, nefa tsy sahy niverina fa naleoko ihany niditra.
- Madama Zara, hoy aho nitsiky tsy sazoka, miasa ato angaha ianao?
- Hihihi, hay ve ialahy e, hoy izy nitsiky tamiko… Tsy miasa ato aho fa itsy zanako itsy no miasa ato ka.
Niontana iray ihany ny foko, endrey izany fidobodobony ao anaty tratra keliko ao…
- Zara? Hoy aho nanatona ilay tovovavy.
- Feno? Hoy ilay tovovavy sady nitsangana izy ‘ndeha hamihina ahy…
04.01.16 Tanambao 1 Toamasina